Yenza iimvavanyo ngokulula ngokuQinisekiswa | Martech Zone
Yenza iimvavanyo ngokulula ngokuQinisekisa
NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2012 NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2012 Douglas Karr
Ngelixa sihlalutya ezinye izilumkiso zexesha lokwenyani namhlanje ukuzenzekela ngokuzenzekelayo Umthengi wethu, kwiLungelo lokunxibelelana, uMarty Thompson wahlangana nekhonkco kwindawo yovavanyo ebizwa qinisekisa. Yindawo yokuvavanya efikelelekayo kakhulu enetoni yeempawu kunye nesixhobo esibonakalayo esilula kakhulu, esibonakalayo sokufumana uyilo, iisayithi kunye nolwakhiwo oluvavanywayo kunye nokufumana ingxelo.
Nantsi iVidiyo yokujonga ngokubanzi:
Qinisekisa ezi ndlela zilandelayo zokuvavanya zikhona:
Cofa kuvavanyo -Bona apho abasebenzisi bacofa khona ngokusekwe kumbuzo.
Uvavanyo lweMemori - Fumanisa ukuba yintoni abantu abayikhumbulayo.
Uvavanyo lweMood -Funda indlela abantu abavakalelwa ngayo ngescreen.
Uvavanyo lokukhetha -Bonisa izikrini ezimbini kwaye ubuze abasebenzisi ukuba bakhethe.
Uvavanyo oluchazayo -Vumela abasebenzisi babeke amanqaku kwisikrini sakho.
Uvavanyo lwelebheli -Buza abasebenzisi ukuba zithini izinto ezithile kubo.
Uvavanyo lokuCofa iphepha elininzi -Bona apho abasebenzisi bacofa khona ngokulandelelana kwezikrini.
Uvavanyo oludibeneyo - Beka iimvavanyo ezininzi kwindawo enye yokuhamba.
Ngaphantsi kwama- $ 30 ngenyanga, Qinisekisa ukuvumela ukuba wenze iimvavanyo ngokukhawuleza, wabelane ngeemvavanyo kwaye ufumane iziphumo-wabelane ngeTwitter, Facebook okanye ii-URL zabucala, emva koko akuncede uqonde kwaye wenze izigqibo ngokulula ukufundwa, ukunika ingxelo ngengxelo.
tags: vavanyoingxelo yoyiloukwahlula uvavanyouvavanyoizixhoboIngxelo yomsebenzisiizixhobo zoyilo lwewebhu
Imithombo yeendaba yeNtlalo